Maxaa kala socotaa Sharciga Tirakoobka Qaranka ee uu meel-mariyay Golaha shacabka? – Kalfadhi
in Baarlamaanka, Shuruuc iyo Hindise-Sharci, Warar
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa 28-kii bisha Oct meel-mariyay Sharciga Tirakoobka Qaranka, sida uu sheegay Guddoomiye Mursal.
Sharcig ayaa horay waxaa loogu soo-sameeyay wax ka bedel, kaddib markii Baarlamaanka uu dib u celiyay. Waxaa shalay uu sharcigu maray akhrintii saddexaad ka hor inta aysan ansixinin xildhibaannada.
Meelaha wax-kabedelka lagu sameeyay waxaa kamid ah in magaca Golaha hay’adda tirakoobka, lagu bedelay golaha maamulka iyo hay’adda tirakoobka Qaranka.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS Mudane Mohamed Mursal Sheikh Abdirahman, ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta Sharciga Tirakoobka Qaranka, waxaana uu sheegay in 137 xildhibaan ay u codeyeen sharciga, halka aysan jirin xildhibaan diiday, waxaana ka aamusay saddex xildhibaan.
Golaha maamulka iyo hay’adda tirakoobka Qaranka waxaa uu ka koobnaan doonaa sagaal xubnood oo uu kamid yahay agaasimaha guud ee hay’adda tirakoobka Qaranka.
Xubnaha intooda baan waxaa lagu soo xulayaa aqoontooda iyo xirfadooda iyada oo la isticmaalayo tartan furan.